Salaada, Siduu u tukan jirey Rasuulkii Alle (S.C.W.)
Siduu u tukan jirey Rasuulkii Alle (S.C.W.)
naxariista Eebbe iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha ahaatee oo kooban
Kacbada xaggeeda Ujeedsashada
Qofkase u tukada meel aan Kacbada ahayn isagoo garaneynin
Salaadda lagu tukado doonta iyo diyaaradda
Salaadda oo lagu tukado istaag iyo fadhi
Qofka isagoo kabo wata tukanaya
Salaadda oo lagu tukado minbarka korkiisa
Waajibnimada salaadda in la dhigto daah loona dhawaado
Dhererka daaha uu ka sareynayo dhulka
Lama oggola salaadda in loo tukado xabaasha xaggeeda
Lama ogola in la hormaro qofka tukanaya hortiisa haba ahaatee Masjidka Xaramka
Waajibnimada qofka tukanaya inuu u diido qofka hormaraya haba ahaatee Masjidka Xaramka
In hore loo socdo si uusan qof u marin hortaada
Waxa burinaya salaadda
Meesha gacmaha la saarayo
Dimishiq 26.2.1392 Maxamed Naasirud-diin al-Albaani
Qofka tukanaya salaadda cabsida صلاة الخوف uuna jiro dagaal daran, waa loo oggol yahay inuu tukado isagoo wax saaran, qofka xanuunsan ee aan awoodin inuu istaago, markaasi wuxuu tukanayaa isagoo fadhiyo hadduu awoodo, haddiise uusan awoodin wuxuu u tukanayaa dhinac dhinac. Qofkase tukanaya salaad aan waajib ahayn wuxuu tukan karaa isagoo wax saaran ama fadhiya hadduu doono. Wuxuuna rukuucayaa oo uu sujuudayaa isagoo madaxa hoos u dhigaya, sidaas oo kale qofka xanuunsan, waana inay ahaataa sujuuddiisa mid ka hooseysa rukuucdiisa.
Go Up Salaadda lagu tukado doonta iyo diyaaradda:
15- Haddiise uu iska siibo kabihiisa yuusan dhigin midigtiisa ee wuxuu dhigayaa bidixdiisa hadduusan ku tukaneynin bidixdiisa qofna, haddiise uu ku tukanayo wuxuu dhigayaa labadiisa lugood dhexdooda , sidaasna waxaa faray oo uu ka sugnaaday Nabiga n.n.k..
54- Waana in qofka la tujinayo uu imaamka gadaashiis uu akhriyaa salaadda hoos loo akhriyo. Iyo sidoo kale salaadda kor loo akhriyo hadduusan maqlaynin akhrinta imaamka amase uu yara aamuso imaamka markuu akhriyey ka dib aamusid uu akhrin karo, inkasta oo aynu qabno aamusiddaasi ineysan ku sugnaanin Sunnada.
88- Dabadeed markuu sujuudayo ayuu gacmaha dhulka dhigayaa ka hor jilbihiisa, sidaas ayuuna faray Rasuulka Eebbe n.n.k. wayna ka sugan tahay inuu sidaas sameeyay, wuxuuna dadka ka reebay inay dhigtaan jilibka sida geela u dhigto jilibka, geeluna wuxuu dhigtaa jilbaha kuwaasoo ah lugihiisa hortooda- marka hore.
141- Wuxuuna sidaas oo dhanna sameynayaa at-Taxiyaadka kasta.